Russia iyo China oo cambaareeyey hubka faransiiska uu ku taakulayay mucaaradka Libya – SBC
Russia iyo China oo cambaareeyey hubka faransiiska uu ku taakulayay mucaaradka Libya
Posted by editor on Julaay 1, 2011 Comments
Addis Ababa:- wasiirka arrimaha dibadda Russia ninka lagu magcaabo Serjeey Lafroof ayaa ku tilmaamay qaraarkii faransiiska ee hubka ugu daadisay dhanka cirka mucaaradka libya in ay tahay xadgudub qaraarka ka soo baxay golaha amaanka ee tirsigiisu yahay 1970.
Sidoo kale bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda china ayaa lagu booriyey dowladaha caalamku in ay fuliyaan xeerarka QM ka soo saartay hub u diridda dalka Libya.
Bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda China ayaanan lagu xusin magaca dowladda Faransiiska, balse waxa uu shiinuhu ugu baaqay in dowladaha caalamka ay ilaaliyaan qaraarka ka soo baxa golaha amaanka.
Dhanka kale dowladda Faransiiska ayaa difaacday talaabaii ay hubka u daadisay mucaaradka Libya.
Isbahaysiga NATO ayaanan wali wax qoraal ah aan ka soo saarin inkastoo admiral Jiyambawlo Di Baawla oo ah madaxa guddiga milatariga isbahysiga uu u sheegay saxafiyiin ku sugan Brussels in isbahaysigooda aysan ka qeyb qaadanayn howlo noocaas oo kale, wuxuuna sii raaciyey si wanaagsan ayaa u ognahay waxaa jira dowladda sameenaya arrintaas, balse ma doonayo in aan faafaahin ka bixiyo.
Wasiiru dowlaha arrimaha caalamiga Britain Gerald Haworth ayaa sheegay in ay jiraan su’aalo la iska weydiinayo gaar ahaan arrinta ku aadan qaraarkii QM ee ogolanayey fargaelin milateri dalka Libya inkastoo xaaladaha qaar ay suurtagal tahay in si cad loogu bareero.
Wasiirka ayaa intaas sii raaciyey in Britain aysan doonayn in ay hub siiso mucaaradka Libya balse talaabada faransiiska ay tahay arrin u gaar ah faransiiska , mana aha in cambaareen loo jeediyo faransiiska arrintaan ku aadan , laakiin waa arrin aan haboonayn in aan sameyno ayuu sii raaciyey.
France aya xaqiijisay in ay u daadisay mucaaradka Libya hub tankiisu gaarayo 40 tan buuraha galbeedka Tripoli iyadoo adeegsanysa baarashuut ama daladaha si ay ugu caawiso dagaalka ay kala soo horjeedaan maamulka Madaxweyne Qadaafi.
Afhayeen milatari oo faransiis ah ayaa sheegay in hub iyo rasaas loo diray qabaa’ilka Amaasiiqiga buuraha Nufuusa horaantii bishan June.
Xukuumadda Washington ayaa seehgtay in qaraarka tirsigiisu yahay 1973 uu u fasaxayo dowladaha in ay hub u diraan mucaaradka Libya inkastoo